နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းနှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ခင်းကျင်းပြသ | Myanmar Industry Portal
» နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းနှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ခင်းကျင်းပြသ
နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းနှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ခင်းကျင်းပြသ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ (၁)
နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၇) ကို ယနေ့မွန်းလွဲ (၁၃:ဝဝ) နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၁)၊ စီမံကိန်း နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီဥက္ကဌ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဌ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများလေ့လာသုံးသပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်စေမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒတစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ရုံးအမှတ်(၁)၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံများနှင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့်အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသထားမှု အခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အထူးလိုအပ်နေသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရေး၊ လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုသုံးယာဉ်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ထားရှိမှုများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ဝင်ထုတ်ကုန်များ ပုဂ္ဂလိက နှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ တေရသမအကြိမ်မြောက် ကထိန်သင်္ကန်း...
ဆေးဝါး Formula အား ဝယ်ယူရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်...
Desktop Computer များ နှင့် UPS များ , Laptop Com...
Stainless Steel Pipe Making Machine နှင့် Laser Cu...